Gufgaf|Online किशोरावस्था बारे ५ कुरा
किशोरावस्था बारे ५ कुरा
गफगाफ - १) किशोरावस्थामा किन डन्डीफोर आउँदछ ? के यौन सम्पर्क गर्नाले डन्डिफोर कम हुन्छ ?
डन्डिफोर किशोरावस्थामा अनुहार र ढाडमा आउने पीपले भरिएको बिबिरो हो । किशोरावस्थामा डन्डिफोर आउनु साधारण कुरो हो । शरीरको रागरस (हर्मोन) ले गर्दा छालामा तेल निकाल्ने ग्रन्थीहरुलाई क्रियाशील बनाउँदछ र यी ग्रन्थीको आकारमा बृद्धि हुन्छ । यसमा हुने चिल्लो पदार्थले गर्दा जब ग्रन्थीको छाला बाहिर खुल्ने मुखको प्वाल बन्द हुन्छ तब ती ग्रन्थीहरु पाक्छन् र पीप भरिएको डन्डिफोरमा परिवर्तन हुन्छन् ।
मुखलाई लगातार साबुन पानीले धोएर छालालाई सुख्खा पारेर सफासँग राखेमा अनुहारमा आएका डन्डिफोरलाई बढ्नबाट रोक्न सकिन्छ । तर, डन्डिफोरलाई कसै कसैले कोट्याउने, चिमोट्ने गर्ने गर्दछन् जुन बिल्कुलै गलत हो । यस्तो गरेमा पछि संक्रमण पनि हन सक्छ ।
डन्डिफोरबाट बच्न खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । जस्तै, चिल्लो पदार्थ भएको खाना, चकलेट, सुपारी, मादक पदार्थ, भुटेको, तारेको आदि खानाहरुले छाला र डण्डिफोरलाई नराम्रो असर पार्दछ । यदि त्यो अवस्था चिन्ताजनक भएमा छाला रोग विशेषज्ञ डाक्टरको सल्लाह लिनुपर्दछ ।
यौन सम्पर्क गरेपछि डन्डिफोर कम हुन्छ भन्ने धारणा एकदमै गलत कुरा हो । डन्डिफोर कम गर्न त छालालाई सुख्खा र सफा राख्नु पर्दछ ।
२) कुन रागरस (हर्मोन) ले गर्दा शरीरका विभिन्न अङ्गहरुमा रौं पलाउँदछ र किन केटीहरुको दाह्री हुँदैन ?
टेस्टोस्टेरोन () नामक रागरस () पुरुषहरुमा अण्डकोषबाट निस्कन्छ भने महिलाहरुको डिम्बाशयबाट निस्कन्छ र महिलाहरुको तुलनामा पुरुषहरुमा ४०–६० गुणा बढी हुने गर्दछ । यो रागरस (हर्मोन) को कारणले नै शरीरका विभिन्न अङ्गहरुमा रौं पलाउँदछ । त्यसैले महिलाहरुको यो हर्मोनको मात्रा ज्यादै कम हुने भएकोले अङ्गहरुमा रौं त पलाउँछ तर, दाह्री जुङ्गा चाहिं हुँदैन ।
३) किन युवा तथा किशोर किशोरीहरु केवल साथीहरुको साथ बढी रुचाउँछन् र आफ्ना अभिभावकहरुले आफूलाई नबुझेको महशुस गर्दछन् ?
युवा तथा किशोर किशोरीहरुले केवल साथीहरुको साथ बढी रुचाउने तथा आफ्ना अभिभावकहरुले आफूलाई नबुझेको जस्तो महशुस गर्ने अवस्थालाई हामी ‘पुस्तैनी भिन्नता’
(नभलभचबतष्यल नबउ) भन्दछौं । यो हरेक पिंढी र पुस्तामा, हरेक किशोर किशोरी र अभिभावकबीच देखापर्ने अवस्था हो ।
हम्रो जीवनका धेरै भागहरु छन् । त्यसमध्ये युवा तथा किशोर किशोरीले शिशु अवस्था र बाल्यावस्था मात्र पार गरेका हुन्छन् भने उनीहरुका अभिभावकले किशोरावस्थामा भोग्ने भोगाइ पनि पार गरिसकेका हुन्छन् । त्यसैले हरेक किशोर किशोरीको सोचाइ सिमित र अपरिपक्व हुन्छ भन्ने अभिभावको भावना हुन्छ । यहि भावनालाई किशोर किशोरी मान्न तयार हुँदैनन् किनकी उनीहरुले भोगेको भोगाई र देखेको कुराहरु मात्र विश्वास गर्ने मानव निहित सोचाइको विकास उनीहरुमा भइसकेको हुन्छ । त्यसैले नयाँ कुराको अनुभव गर्ने र त्यसलाई बुझेर गर्नुभन्दा पनि गरेर बुझ्नमा उनीहरु अग्रसर रहन्छन् । फलस्वरुप अभिभावक र किशोर किशोरीको आपसी सोचाइ नमिलेको जस्तो देखिन्छ । उनीहरुलाई आफ्नो उमेर समूहका व्यक्ति नै महत्वपूर्ण लाग्न थाल्छ किनकी यहाँ उनीहरुको पुस्तैनी भिन्नता देखापर्दैन । एक अर्काको सोचाइ र व्यवहारमा समानता पनि पाइन्छ । अपरिपक्व किशोर किशोरी सधैं साथीहरुसँग मात्र भेट्न जानाले कहिलेकाहिं गलत संगतमा परेर किशोर किशोरीको जीवन न्र बर्बाद भएको पनि देखिएको छ ।
त्यसैले किशोर किशारीले आफ्नो कुरा प्रष्टसँग अभिभावकलाई भन्ने क्षमताको विकास गर्नुपर्दछ र उनीहरुकै मार्ग निर्देशनमा आफ्ना रुचि र उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न सके हाम्रो आत्मसम्मान र अभिभावकतिरको कर्तव्य दुवै पुरा हुनेछन् ।
४) किन केटीहरु राम्री र लजालु स्वभावका हुन्छन् ?
किशोरावस्थामा केटा र केटीहरुको बाहिरी र भित्री दुवै रुपमा विकास भएको हुन्छ । विशेषगरी यस बेला केटाहरुको अनुहारको वरिपरि र नाकको मुन्तिर आउने रांैहरुले गर्दा केटा भनेर चिनिने हुन्छ । केटीहरुको भने शरीर सुडौल हुँदै जान्छ र अनुहारमा रौहरु नआउने भएकोले उनीहरुको अनुहार केटाको भन्दा राम्रो देखिन्छ । त्यसैगरी रागरसको भिन्दै विकास क्रमले गर्दा पनि केटीहरुको छाला नरम र आकर्षक हुने गर्दछ । त्यस्तै व्यवहारमा भने लजालुपन र सम्यौता आउन थाल्छ । यो स्वभावले गर्दा नै केटीहरुले आफ्ना सन्तानलाई न्यायो माया दिन पनि सक्दछन् ।
५) किशोरावस्थाका सकारात्मक र नकारात्मक परिणामहरु के के हुन् ?
किशोरावस्थामा हुने परिवर्तनहरुका केहि राम्रा र केहि नराम्रा असरहरु यस प्रकार छन् ः
व्यक्ति परिपक्व हुने र आत्मसम्मान बढ्दै जाने ।
सामाजिक दायित्वको बोध हुने, अधिकार र कर्तव्य निर्वाह गर्न सक्ने ।
डअघिल्लो पुस्ताले गर्न बाँकी र गर्न नसकेका क्रियाकलापहरु किशोर किशोरीबाट पूरा हुने ।
नयाँ विचारधाराहरु समाजमा प्रतिपादन हुने ।
जोश र जाँगर उत्सुकतामा परिणत हुँदा कुलतमा लाग्ने, लागू पदार्थ दुव्यसन गर्ने र यौन सम्बन्धी असुरक्षित क्रियाकलापमा लाग्न सक्ने ।
पुस्तैनी भिन्नता (नभलभचबतष्यल नबउ) देखा पर्ने हुनाले अघिल्लो पुस्ताको कुरा नबुझेको जस्तो महशुस हुने । विशेषगरी पढाई सम्बन्धी पुस्तैनी भिन्नता देखा पर्दा अघिल्लो सिद्धान्त र प्रतिक्रियाहरुमा विश्वास नलाग्नेले समाजबाट बहिष्कृत हुनुपर्ने समस्या आईपर्न सक्छ ।
एकपछि अर्को प्रयोग गर्ने बानी बसेकाहरुले कहिलेकाहिं जोखिमपूर्ण कार्यहरु गर्दछन् । जस्तै, यौनसँग सम्बन्धित कार्यहरु र लागूपदार्थ सेवन, असुरक्षित रुपमा हुन गयो भने त्यसबाट शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक समस्या समेत उब्जन सक्दछन् ।